खुल्यो यौ’नबजार, कि’स गर्न प्र’तिबन्ध अनुहारबाट मास्क खोल्न नपाउने ! – eSidhakura
ए झरी…सार्वजनिक ।
मुख्य पृष्ठअन्तरास्ट्रियखुल्यो यौ’नबजार, कि’स गर्न प्र’तिबन्ध अनुहारबाट मास्क खोल्न नपाउने !
काठमाडौं। कोरोनाभाइरसको म’हामारीका कारण लगाइएको लकडाउन विश्वभरी विस्तारै खु’कुलो पार्न थालिएको छ । नेदरल्याण्ड र थाइल्याण्ड सरकारले आफ्नो देशका वे’श्यालय र रे’डलाइट एरिया क’डा प्र’तिबन्धको नि’यमसहित खोल्न अ’नुमति दिएका छन् । यी देशमा अब यौ’नकर्मी र ग्राहकहरु रे’डलाइट ए’रियामा जान पाउँछन् तर कि’स गर्न पाउँदैनन् । उनीहरुले जो’डले सा’स फे’र्न पनि पाउने छैनन् ।बैंकक पोस्टका अनुसार थाइल्याण्डको राजधानी बैंककको रे’डलाइट एरिया ३ महिना ब’न्द रहेपछि १ जुलाइदेखि खु’लेको छ ।
थाइल्याण्डका बा’र, का’राओके भे’न्यू, म’साज पा’र्लर आदि पनि खु’लेका छन् । विगत ३७ दिनदेखि थाइल्याण्डमा कोरोना संक्रमणको एउटा पनि स्थानीय के’स नभेटिएपछि यहाँ यी व्यवसाय खोल्न अ’नुमति दिइएको हो । यससँगै हजारौंको संख्यामा रहेका यौ’नकर्मीहरु आफ्नो काममा फ’र्किएका छन् ।रे’डलाइट ए’रियामा जा’नेहरुले केही नि’यम पा’लना गरेर मात्र जानुपर्नेछ । उनीहरुले आफ्नो अ’नुहारबाट मा’स्क खोल्न पाउने छैनन् । आफूलाई राम्रोसँग से’निटाइज गर्नेछन्, कि’स गर्ने छैनन् र जो’डले सास फे’र्न पनि पाउने छैनन् ।
रे’डलाइट ए’रियामा जानुभन्दा पहिले सबै ग्राहकको तापक्रम जाँ’च गरिनेछ । उनीहरुको पूरा ठेगाना, फोन नम्बर नोट गरिनेछ । डान्स बा’रमा जानेहरु स्टेजबाट कम्तीमा २ मिटरको दूरीमा बस्नुपर्नेछ । भित्र रहेका अन्य व्यक्तिहरुसँग पनि एक मिटरको दूरी कायम गर्नुपर्नेछ ।समाचार एजेन्सी रोयटर्सका अनुसार नेदरल्याण्डमा पनि १ जुलाइदेखि नै रे’डलाइट ए’रिया खुलेका छन् । यहाँ पनि ठिक त्यस्तै नि’यम ला’गू गरिएका छन् जस्ता नि’यम थाइल्याण्डमा छन् । यी दुवै देशमा यौ’नकर्मीहरुले पहिलेदेखि नै स’फाइको निकै ख्याल गर्दै आइरहेका छन् र अब यो अझै बढ्नेछ ।
ए’म्स्टर्डम जनस्वास्थ्य सल्लाहकार ड’बी मे’नसिंक भन्छिन् ‘रे’डलाइट एरियामा बस्ने यौ’नकर्मीका लागि को’भिड १९ को ख’तरा बढी छ किनकि उनीहरुको काम नै त्यस्तै छ । त्यसैले मानिसहरुले आफ्ना आवश्यकता क’डा प्र’तिबन्धमा बाँ’धिएर पूरा गर्नुपर्छ ता’कि सबै सु’रक्षित रहुन् ।’मो’इरा मो’ना नामकी एक यौ’नकर्मीले आफूले पहिले नै सु’रक्षाका सबै तयारी गरिसकेको बताएकी छिन् । उनले ले’टेक्स कपडा, ले’दर फे’स मा’स्क, प’ञ्जा, स’र्जिकल फे’स मा’स्क आदि म’गाइकेकी छिन् । त्यसैले उनलाई चि’न्ता छैन । उनले जुन ग्रा’हकले नि’यम तो’डे पनि फि’र्ता पठाउने बताइन् ।
नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धको विकास आफ्नो उच्च महत्वमा : चिनियाँ राष्ट्रपति सी